'I-Nightmare ku-Elm Street' Iqalisa kabusha Izokwenzeka "Ekugcineni" Umbhali Wezithombe Uthi - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-Nightmare ku-Elm Street' Reboot Kuzokwenzeka "Ekugcineni" Umbhali Wezithombe Utsi
'I-Nightmare ku-Elm Street' Reboot Kuzokwenzeka "Ekugcineni" Umbhali Wezithombe Utsi
ebhalwe ngu Waylon Jordan December 26, 2018
UDavid Leslie Johnson-McGoldrick uthathe imizuzu embalwa ephuma esimisweni sakhe esimatasa ekhangisa U-Aquaman kuleli sonto ukwazisa abalandeli ngamathuba wokuvuselela ama-New Line's I-Nightmare ku-Elm Street.
UJohnson-McGoldrick, ogama lakhe lokubhala langaphambilini alibandakanyi amaJames Wan kuphela U-Aquaman kodwa futhi Intandane futhi Ukuncoma 2, utshele I-GameStop ukuthi ukuqala kabusha kusenzeka, kepha ukuthi "akukho okushaya amanzi okwamanje."
Eqinisweni, umbhali wesikrini uthi njengamanje ugxile ekubhaleni Ukuncoma 3, kepha lokho a Ubusuku ukuqala kabusha akukaze kude nezingqondo zabadali eNew Line.
Umzamo wokugcina wokuqalisa kabusha i-franchise wafinyelela kumathiyetha ngo-2010 lapho uJarieie Earle Haley adlala khona, ake sithi, ngaphansi kwemiphumela emihle lapho abaningi bekhomba ukusebenza kukaHaley njengesizathu sokuthi ifilimu yehlulekile.
Ngenkathi abalandeli beshesha ukweqa enqoleni enenzondo yalokhu kuqalisa kabusha, kunabenzi abaningi bamafilimu nabalandeli abathanda le franchise futhi abangathanda ukubona ifranchise ivuswa ngendlela efanele.
Eqinisweni, eminyakeni yamuva nje, abenzi bamafilimu e-indie bagxume bangena, baphonsa amagama abo esigqokweni ukuze bathole ithuba lokuhola ifilimu entsha.
Ngokuphawulekayo, umqondisi waseFlorida UDomonic Smith kuthusile izethameli eziku-inthanethi ezingekho neyodwa kodwa "ama-trailer" amathathu wesiphakamiso esihlongozwayo I-Nightmare: Buyela ku-Elm Street, engagcinanga ngokuthola imibono eyizigidi ku-YouTube kodwa futhi edonse ukunakekelwa kwe-franchise alum.
Ngokuphumelela kuka-David Gordon Green's 2018 Halloween ephinde yafaka uchungechunge emuva kwifilimu yokuqala, futhi ngezindaba zokuthi iSpringHill Entertainment ihlose ukuqalisa ukuqala kabusha kwe NgoLwesihlanu umhla ka-13, can omunye umzamo ku- I-Nightmare ku-Elm Street ngempela kube lula kangako?
Asicabangi, futhi noma uJohnson-McGoldrick engakwazi ukusinika umugqa wesikhathi okwamanje, kunabalandeli abenele abangaba nentshisekelo, ikakhulukazi uma uRobert Englund engagibela ebhodini. Umlingisi nentandokazi yabalandeli basho ekuqaleni konyaka ukuthi yena ungahle ube nentshisekelo yokunikela ngeglavu futhi.
Futhi mhlawumbe, mhlawumbe, uSmith angalithola lelo thuba ngemuva kwakho konke.
Hlala ubukele i-iHorror ngazo zonke izibuyekezo zakamuva, futhi usazise ukuthi ungathanda ukukubona nini lapho uqala kabusha i-franchise kumazwana angezansi!
Izincwadi ezihamba phambili eziHlanu eziSabekayo zika-2018 – Waylon Jordan's Picks
Umbhali / Umqondisi uMaria Pulera Uxoxa 'Phakathi Kwemihlaba'